ब्यबसायीक अम्बा खेति गर्ने बैज्ञानिक तरिका – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ भाद्र ११, बुधबार ०५:३०
अम्बा खोेतिको लागि नेपाल उत्कृष्ट मानिन्छ तर पनि नेपालमा ९५ % अम्बा भारतवाट आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५|७६ मा भारतबाट मात्र रु ७७ करोड ३५ लाख ३५ हजार मुल्य बराबरको १ करोड ७९ लाख ७५ हजार ६६८ केजी अम्बा आयात गरेको छ । यो स्याउ भन्दा पछि बढि आयात हुने फलफुल हो ।
अम्बा, Psidium (अङ्ग्रेजी: Guava, Poor man’s apple; अन्य नाम:अम्बक, बेलौती) म्यारटेसी परिवार अन्तर्गत पर्ने फल हो। यसको रूख १५ देखि २० फिटसम्म अग्लो हुने यो पतझड वर्गको वनस्पति हो। अम्बा नेपालमा पहाड, भित्री मधेश र तराईमा लगाइएका पाइन्छन्, करिब १५०० मिटरको उचाइसम्म यसको खेती सफलतापूर्वक गरिएको पाइन्छ ।
अम्बालाई उष्ण र उपोष्ण हावापानी चाहिन्छ । अम्बालाई २३ डिग्री सेलसियसको तापक्रम र १००० देखि २००० मिलिलिटरको वार्षिक वर्षा आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा हाल मुख्य रुपमा बैशाख-जेठमा फूल फुल्ने र साउन-भदौमा फल टिप्ने गरिन्छ जसलाई बर्षे अम्बा भनिन्छ । यी अम्बाको मूल्य कम हुनाको साथै त्यति स्वादिलो हुँदैन । जबकी हिउद याममा भारतबाट ठूलो मात्रामा हिउदे अम्बा महँगोमा खरिद गरिन्छ । तसर्थ अब हामीले हिउद (जाडो) याममा बेमौसमी अम्बा फलाउनुपर्छ ।
अम्बा कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ?
अम्बाले उपोष्ण प्रदेशीय हावापानी रुचाएता पनि हिउदमा ठण्डा हुने उष्ण प्रदेशीय ठाउँहरुमा पनि यसको खेती सफलताकासाथ भई रहेको छ । यसले लामो समयसम्म तुसारो सहन सक्दैन तर राम्रोसंग फूल फुल्न र फल उत्पादन हुन हिउँदमा चिसो तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ ।
अम्बा खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
अम्बा खेती बलौटे, दोमट, चिम्टाईलो, रातो कालो सबै किसिमको माटोमा गनै सकिन्छ तर जमीनमा पानी जम्ने अवस्था भने सृजना हुनु हुदैन । समथतर जमीनमा पानीको निकासको ब्यवस्था राम्ररी मिलाउनु पर्दछ ।
अम्बाका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
बिरुवाको दुरी कति कायम गर्ने भन्ने कुरामा बिरुवा प्रजनन् गरिएको तरीका, जात, माटोको उर्वरा शक्तिमा भरपर्दछ । साधारणतया ३ देखि ८ मिटरको दुरी भित्र बिरुवा लगाउनु पर्दछ ।
अम्बाको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाडल खन्नु पर्दछ ?
रेखाङ्कन गरी बिरुवा रोप्ने ठाउँ निश्चित गरिएको ठाउँमा १ घन मिटरको खाडल खनी १५–२० दिन खाडललाई सुक्न दिई त्यसपछि २०–२५ के.जी. कम्पोष्ट-गोबर मल मिलाएर खाडल पुर्नु पर्दछ ।
नेपालमा अम्बाका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ?
नेपालमा खेती भई रहेका प्रमुख जातहरुमा लखनऊ–४९, अलहावाद सफेद, वनारसी, चित्तिदार, केजी–१, रेड फ्लेस्ड, वेदना, स्थानीय आदि हुन ।
अम्बाको बिरुवा उत्पादन गर्न कुन–कुन विधि अपनाउ सकिन्छ ?
यसका बिरुवा बीउबाट, गुटी बाँधेर, ग्राफ्टीङ्ग, वडिङ्ग, स्टुलिङ्ग, कटिङ्ग आदि सबै विधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ तर सफल विधिमा बीउबाट निकाल्ने र गुटी बाध्ने दुईवटा विधि हुन् । हाल नेपालमा गुटी बाँधेरनै बिरुवा उत्पादन गरिन्छ ।
अम्बाको बोटहरुमा कस्ता–कस्ता कीराहरुले सताउछन् ?
यसमा फलको औंसा, मिलिवग, कत्ले, बोक्रा तथा पात खाने झुसिल कीरा आदिले नोक्सान गर्दछन्। यिनीहरु मध्ये फलमा लाग्ने औंसा सबैभन्दा हानीकारक हुन्छ।
अम्बालाई ‘खटिरे’ रोग लागे के गर्ने ?
रोगले आक्रमण गरेका भागलाई हटाई जलाउनु र काटछाट गरेको ठाँउमा ‘वोर्डो पेष्ट’ बनाएर छर्कनु पर्दछ। जब माटोमा ‘क्याल्सियम’ र ‘बोरन’ को कमी हुन्छ तब यो रोग देखा पर्न सुरु गर्छ।
त्यसैले बेला बेलामा ‘क्याल्सियम नाईट्रेट’ र ‘बोरेक्स धुलो’ प्रयोग गर्नु पर्दछ। रोग सक्रमण को सुरुवातसँगै विरुवालाई १ प्रतिशतको ‘वोर्डेक्स मिक्स’ बनाएर पनि छर्न सकिन्छ। त्यस्तै लाइम सल्फर १५-१५ दिनको अन्तरमा ३-४ चोटी सम्म स्प्रे गरेर पनि यसको निदान गर्न सकिन्छ ।
स्रोत : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
२०७६ श्रावण १९, आईतवार १३:५८
२०७६ असार ३०, सोमबार १४:२१